Ezinụlọ ndị China, Ọ bụ na ha erughị eru nkewa nke atọ?
Home / blog / Ezinụlọ ndị China, Ọ bụ na ha erughị eru nkewa nke atọ?
2020 / 10 / 17 nhazi ọkwablog 1007 0
Oge obula m na ndi enyi m na ekwu maka Japan, apughi m ikpochapu otu isi okwu: ụlọ mposi.
Lọ mposi na Japan, ma nke ọha ma nke ụlọ, nwere mmasị na-enweghị atụ, dị ka enyi m kwuru, “Ọ na-adị m mma karịa mgbe m ga-aga mposi na Japan.
Otú ọ dị, ihe kasị masị m banyere ụlọ mposi ndị Japan abughi ihe nzuzu nke di ocha, mana otu esi eji ulo mposi.
Ndị Japan hụrụ n'anya ịsa ahụ, ya mere n'agbanyeghị agbanyeghị ụlọ ịsa ahụ buru ibu ma ọ bụ obere, bat ahụ bụ ọkọlọtọ n'ụlọ ọ bụla.
Anyị ebubatala nkewa atọ ahụ tupu, na ihe kpatara anyị ji ekwu banyere nkewa atọ ọzọ taa bụ n'ihi na anyị chọpụtara na e nwere ọtụtụ ndị mmadụ na-aghọtaghị ihe nkewa atọ ahụ bụ, ha na-agbaso usoro maka ọdịiche atọ, na-enweghị nlezianya tụlee ma ọ bụ ihe ha chọrọ ma ọ bụ na ọ bụghị.
Ya mere, taa anyị ga-enwe ezigbo nkata maka gini bu nkpawa ato, ma obu uzo ato di nkpa.
Gịnị Bụ Nkewa Nke Atọ?
Nke mbụ, anyị kwesịrị ịkọwapụta echiche nke nkewa atọ, ọ pụtaghị ịgbakwunye ọnụ ụzọ iko ma ọ bụ ákwà ịsa ahụ na ime ụlọ ịwụ ahụ ọbụlagodi na ọ dị iche.
Nke a abụghị nkewa atọ, kama ọ bụ “nkewa mmiri na nke ọkpọọ.”
Ezigbo nkewa atọ pụtara na ebe ịsa ahụ, ụlọ mposi na nkewa mmiri anaghị emechi ibe ha ma mmadụ atọ ga-eji otu oge. Yabụ, nkewa atọ bụ ime ụlọ atọ nwere onwe ha, ga-ekekọrịta ọrụ ime ụlọ ịwụ ahụ, na-enweghị onwe ha na nnyonye anya.
Nkewa nke abụọ bụ nke abụọ kachasị mma, ụlọ mposi na-ekewa n'ime mpaghara abụọ nwere onwe ha, mmadụ abụọ na-eji ụlọ ịsa ahụ n'otu oge.
Na ihe ọzọ kachasị mma bụ iji nweta “nkewa mmiri na nke akọrọ”, mmiri mmiri kachasị mmiri si na nke onwe ya, gaa na ime ụlọ ịwụ ahụ iji mee nkebi na ahịrị, ka ị nwee ike zere ime ụlọ ịwụ ahụ niile ka mmiri.
E jiri ya tụnyere ime ụlọ ịwụ ahụ, nkewa abụọ na nkewa atọ nwere ike nweta nkewa nke mmiri na akọrọ, nke na - eme ka nkasi obi nke ime ụlọ ịwụ ahụ dịkwuo ukwuu.
Tụnyere nke abụọ-nkewa, ụlọ ịsa ahụ nkewa atọ nwere onwe ya kpamkpam, nkewa nke mmiri na akọrọ iji mezuo nke ọma, ma n'otu oge ahụ nwere ike belata ezinụlọ ka ọ dịkwuo mma na iji esemokwu na nrụgide, mee ka arụmọrụ nke ụlọ ịsa ahụ dịkwuo mma.
Cheedị banyere ezinụlọ nwere mmadụ atọ. N'abalị, mgbe mama na-asa ahụ, nna nwere ike ịga mposi ma ụmụaka nwere ike ịsa ahụ n'otu oge. Ọ bụrụ na ọnụ ọgụgụ ya karịrị, yana ọgbọ atọ n'otu ezinụlọ, uru nke nkewa atọ na-apụtawanye.
Nke ahụ Bụ Nanị Uru Ọdịdị Nke Atọ Atọ?
Ee e, n'ezie ọ bụghị, na ịtụgharị uche na-enweghị isi. Uru nke nkewa atọ ahụ dị ọtụtụ (ma ọ bụghị na ha agaghị ewu ewu), mana dị ka mbubata, ha nwere ike ịmị mmiri.
Isi ihe kachasị mkpa bụ na ọ bụghị naanị mkpa maka ezinụlọ niile nke China.
Otu ihe kpatara ezinaụlọ ndị Japan ji chọọ ikewapụ atọ bụ na n’uche ha, anaghị anabata ịsa ahụ na ụlọ mposi, otu bụ ebe “ga - adị ọcha” ma nke ọzọ bụ ebe “nsị mmiri” .
Ọ naghị anabata ha ma ọ bụrụ na ime ụlọ ịwụ adịghị iche, mana ọ naghị esiri anyị ike ịnabata.
E kwuwerị, ihe kachasị ewu ewu anyị nweburu bụ otu ibe
Ya mere, akparamagwa ayi banyere nkewa ato kwesiri ewere na ọ bụghị site n'echiche nke uche, mana site na nke bara uru.
Maka ụlọ nke chọrọ nkewa atọ, na mbu ndị bi n'ụlọ ahụ ga-abụ opekata mpe 3 ma ọ bụ karịa, ma ọ bụghị na ọ dịghị mkpa.
Nke abuo, ụlọ ahụ nwere naanị otu ụlọ ịsa ahụ. Ọ bụrụ na ndị ezinụlọ nwere ime ụlọ ịwụ abụọ, ọ bụrụhaala na ha abụọ eme abụọ iche, nwekwara ike ugbua izute kwa ụbọchị iji ya.
Ihe ikpeazụ ị ga-atụle bụ ma ndi ezi na ulo ha aru aru. Ihe ịsa ahụ ga-ewe ogologo oge karịa ịsa ahụ, ebe ịsa ahụ dịkwa na oghere nke naanị otu onye ga-eji. Ya mere, ọ dị mkpa ikewapụ okpokoro ịsa ahụ maka nnukwu ezinụlọ iji saa ahụ, nke bụ ihe mere ndị Japan ji nwee mmasị ịsa ahụ.
Na mgbakwunye na ịdị irè dị iche na otu ezinụlọ na ezinụlọ ọzọ, enwere nsogbu ọzọ maka ezinụlọ ndị China: o siri ike ịghọta atọ-nkewa.
Ihe kpatara ya bụ na nha ụlọ na ọdịdị ya na-achọ ihe dị ukwuu.
Iji mezuo nkewa atọ ahụ, ime ụlọ ịwụ ahụ agaghị adị obere, ihe achọrọ maka ọnụ ọgụgụ ụlọ ka dị elu.
Shapesdị ụlọ ịsa ahụ ndị a na-ahụkarị bụ: warara kwụ ọtọ, warara kwụ ọtọ na akụkụ anọ.
Naanị ime ụlọ ịwụ ahụ dị ogologo nwere ike ị nweta nkewa atọ, ohere kacha mma kewara, naanị tinye nkebi nwere ike ịbụ.
The square ime ụlọ ịwụ, n'aka nke ọzọ, ga-achọ ebe nke ọ dịkarịa ala mita square 4.6, dị ka atụmatụ Nwada Walkie si kwuo.
Isi mmalite: akpa ụlọ ọha
Ọ bụrụ n'ịchọrọ iji ya nke ọma, mpaghara ahụ kwesịrị ịbụ ihe dị ka mita 6 square.
Commondị nkewa nke atọ maka square
Banyere ụlọ mposi tara ahụ …… agaghị enwe ike iru nke a, n'ihi na iru ebe ịsa ahụ dị n'ime ime, mmadụ ga-aga ụlọ mposi. (usoro di omimi kwesiri ibu ③ → ② → ①). Ọ bụrụ na a ga-emezu nke a, ọ ga-adị mkpa iwepụ mgbidi ahụ.
Nkewa ato ma obu nkewa abuo
Ihe doro anya bụ na otu mpempe bụ iwu, ya mere nhọrọ anyị chere ihu bụ ma inwe nkewa ato ma obu nkewa abuo.
Ugbu a ọnọdụ nke nkewa atọ na ime ụlọ ịwụ ahụ dị oke ọkụ, ma mụ onwe m bụ onye na-akwado nkewa atọ, n'ihi na nkasi obi na arụmọrụ nke iji ihe ha nwere bara uru.
Mana oroma mụrụ na Huainan bụ oroma, amụrụ na Huabei bụ Hovenia, na njedebe ma ọ bụ nkewa atọ, ma ọ bụ iji hụ ma ọ bụrụ na ọ gaghị enwe ike na njedebe dịka ọnọdụ obodo si dị, ma meziwanye obi ụtọ nke ndeksi ndụ ha.
Dịka ọmụmaatụ, n'oge na-adịbeghị anya, otu onye ọrụ ibe m nke nọ na-achọ ihe wee nweta eserese imepụta abụọ, imewe nke ime ụlọ ịwụ ahụ dị abụọ abụọ na atọ dị iche iche.
Ka anyị leba anya na nkewa atọ mbụ:
Atọ-nkewa imewe atụmatụ
Ntọala nkewa atọ dị n'akụkụ akụkụ anọ, mana ụlọ ịsa ahụ mbụ dị n'okpuru, yabụ ị ga-ebinye ntakịrị ohere n'akụkụ ụlọ dị n'akụkụ.
The abụọ-nkewa imewe atụmatụ
Designdị ihe atụ abụọ dị iche iche bụ ihe a na-ahụkarị, ya na sink na-apụ n'onwe ya. Atụmatụ abụọ ahụ adịchaghị mma ma ọ bụ dị njọ, ha abụọ dabara adaba n'iji ohere eme ihe.
Agbanyeghị, otu onye ọrụ ibe m mechara họrọ nkewa nke abụọ n'ihi na o zubere ime ka ime ụlọ ahụ n'akụkụ ụlọ ịsa ahụ dị n'ọmụmụ ihe na ọ chọghị ịpụ ọbụna ebe a na-amụ ihe n'ime ime ụlọ ịwụ ahụ. Thislọ a na-abụkarị onye bi naanị ya, ịkwesighi ịmewa atọ.
Zọ nkewa atọ nwere uru nke ya ma ọ dị mma karịa ụzọ ụzọ abụọ maka nnukwu ezinụlọ. Agbanyeghị, nkewa nke abụọ chọrọ obere ohere ma dabara adaba maka obere ezinụlọ.
Nhọrọ nkewa nkewa atọ ma ọ bụ nkewa abụọ kwesịrị ịdabere na mkpa nke aka gị, kama ịchụso ihe a na-akpọ fad.
Otu enyi gị nke gụrụ akwụkwọ na Japan gbaziri otu ụlọ nke dị square mita 38, nwere ụlọ ịsa ahụ dị ogologo kewara atọ, ime ụlọ ịwụ na etiti, ebe ịsa ahụ + nke a na-asa ahụ n’aka ekpe, na ụlọ mposi n’aka nri.
Ebe ọ bụ na mpaghara atọ a juputara na mmadụ, ọ na-emepe ụzọ ụzọ mposi ma jikọta ya na nsị, nke mere ka ọ bụrụ akụkụ nke abụọ.
Agbanyeghị, onye ikwu ọzọ batara n'ụlọ ọhụrụ n'oge na-adịbeghị anya, dịka ezinụlọ nke mmadụ ise, gosiri onye nrụpụta ahụ tupu nrụzigharị ahụ na ọ chọrọ ụlọ ịsa ahụ kewara atọ.
Agbanyeghị, ebe mposi mbụ bụ naanị square mita 4, yabụ agbaziri m square 2 site n'akụkụ ime ụlọ dị n'akụkụ iji gbasaa ebe mposi.
Mgbe nne di m sachara nwa ya n’ime ime ụlọ ịsa ahụ n’abalị, di m na-aga mposi, m nwere ike ịlakpu ụra ozugbo m sachara, yabụ anaghị m echere ibe m. Ọ bụ ezie na ime ahụ enwetatụbeghị, anaghị m akwa ụta maka ya.
Na ihe atụ abụọ a, ọ bụ iji gosi gị na azịza ziri ezi ma ọ bụ nke ọjọọ nhọrọ nkewa atọ ma ọ bụ nkewa abụọ bụ naanị gị maara.
Ọ bụ ezie na anyị na-eche ọtụtụ nhọrọ ihu mgbe niile ma na anyị ga-eme ọtụtụ azụmaahịa na nhazi ụlọ anyị, ọ bụrụhaala na anyị na-eche banyere omume nke anyị ma jụọ onwe anyị ma ọ dị anyị mkpa n'ezie, ọ bụrụ na anyị amalite mkpa ndị ahụ, ọ bụrụgodị na anyị enweghị ike ịchọ izu okè, ma ọ dịghị ihe ọzọ, anyị agaghị akwa ụta ọ bụla.
Foto site n'ikike nke pinterest
Nke gara aga :: Ndụmọdụ Blọ mposi Kachasị Mma Mgbe Niile, All Na Otu Ebe! Osote: Leaky foset? Ọrịa nchara? Mmiri ahụ ọ Na-ebelata Ngwa? Aka Na Otu esi edozi ya
Ath maara Horlọ mposi “Na-esi ”sị” Dị Njọ Chọta nri ...
Mirrorlọ mposi ndozi, 99% nke ndị mmadụ ga-eleghara a zuru ezu
Leaky foset? Ọrịa nchara? Mmiri ahụ ọ Na-ebelata Ngwa? Aka Na Otu esi edozi ya
Ndụmọdụ Blọ mposi Kachasị Mma Mgbe Niile, All Na Otu Ebe!
4.95dị Scandinavian nke 2mXNUMX, Blọ ịsa ahụ Di na Nwunye A Bụ Nke Ọzọ ...
Kohler were ụlọ ọrụ Smart Bathroom maara nke ọma n'ụlọ ikpe maka ihe karịrị $ 1.4 ...